Nyaya Yekutorwa Kwemapurazi Yonetsa Munyika
Gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika nesangano revasori re Central Intelligence Organization (CIO), vaDidymus Mutasa, vanoti hapana mapurazi matsva ari kutorwa.
Vati mhirizhonga yave kuitika iri kukonzerwa nevarungu vari kurambira pamapurazi akatorwa kare. Vatiwo havazivi kuti mutungamiri wehurumende, vaMorgan Tsvangirai, avo vari kuti kune vari kutora mapurazi, vari kugara munyika ipi.
Vati vaTsvangirai vanofanira kudoma mazita emapurazi ari kutorwa. Asi mashoko ava Mutasa anopesana nemashoko emutungamiri wenyika, vaRobert Mugabe, avo vanoti kunyange paine kunyunyuta panyaya yekutorwa kwemapurazi evarungu, hurumende icharamba ichitora mapurazi aya nechinangwa chekusimudzira vanhu vatema.
VaMugabe vataura mashoko aya pamusangano weZanu PF Central Committee waitwa muharare nhasi. VaMugabe vakumbira nyika dzakatemera hurumende yavo zvirango kuti dzibvise zvirango izvi, uye vayambira bato ravo kuti rigare rakagadzirira sarudzo, idzo vanoti dzichaitwa mumakore maviri anotevera.
Ntungamili Nkomo weStudio7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, vaRejoyce Ngwenya, kuti tinzwe maonero avo pamashoko ava Mugabe.
Dzimwe nyaya kubva kuStudio 7...